सुनिल रावल भन्छन्, ‘सायद २ चल्नुपर्छ’ « Ramailo छ
सुनिल रावल भन्छन्, ‘सायद २ चल्नुपर्छ’
नयाँ कलाकारहरुलाई लिएर निर्माता सुनिल रावलले निर्माण गरेको फिल्म ‘सायद २’ आउँदो शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । यसअघि ‘सायद’, ‘होस्टेल’ र ‘होस्टेल रिटन्र्स’ जस्ता सफल फिल्म बनाएको दुर्गिश ब्यानरको चौथो फिल्म ‘सायद २’ चाहिं कस्तो होला त, निर्माता रावललाई ६ प्रश्न गरेका छौं :
१.तपाईंलाई सायद २ व्यापारिक रुपमा कस्तो होला जस्तो लाग्छ ?
मलाई त फिल्मले राम्रो व्यापार गर्ला जस्तो लाग्छ । हामीले दर्शकको रोजाइ अनुसार मनोरञ्जनात्मक फिल्म बनाएका छौं । अहिलेसम्म प्रोमो र गीत संगीतको प्रतिक्रिया पनि राम्रो आइरहेको छ । फेरी दुर्गिश ब्यानरका यस अघिका तीन फिल्महरु सफल भैसकेकाले चौथो फिल्म ‘सायद २’ पनि सफल हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
२.दुर्गिश ब्यानरको अघिल्ला फिल्महरु भन्दा ‘सायद २’ को हाइप कम भैरहेको जस्तो लाग्दैन ?
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । डायलगहरु पनि हिट भैरहेका छन् । हाम्रै ब्यानरको अर्को फिल्म ‘लाउरे’ का कारण रिलिजमा अलि ढिलाइ चाहिं भएको हो । तर विगत दुई सातादेखि हामीले फिल्मको प्रचार तिव्र गरिरहेका छौं ।
३.’सादय २’ को सबैभन्दा बलियो पक्ष के हो ?
फिल्मको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेकै यसको कथा हो । हामीले लभ स्टोरी फिल्म बनाएका छौं । माया, प्रेम र यसको परिणामको विषयमा फिल्म राम्रो बनेको छ ।
४.तपाई किन नयाँ कलाकारहरुसँग काम गर्न रुचाउनु हुन्छ ?
नयाँलाई लिएर काम गर्दा सजिलो हुन्छ । उनीहरुलाई समयको महत्व थाहा हुन्छ । अनुशासनमा बस्छन् । पुराना कलाकारसँग काम गर्दा दुःख पाइन्छ । उनीहरुको समय अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ ।
५.तपाईं नयाँ कलाकारलाई राम्रो व्यावहार गर्नुहुन्न भन्ने आरोप छ नि ?
त्यस्तो होइन । हामी काम गर्दा एकदमै व्यावसायिक हुन आवश्यक छ । म काममा गाली गर्छु । उनीहरुको व्यक्तिगत कुरालाई लिएर अहिलेसम्म गरेका छैन । गाली गरेपनि म राम्रो कामको लागि मात्रै गाली गर्छु ।
६.’सायद २’ मा विल्सन विक्रम राई र संयम पुरीलाई अफर नै नगर्नु भएको कि उनीहरुले समय दिन नसकेको ?
विल्सन र संयमलाई अफर गरेको पनि होइन, उनीहरुले समय दिन नसकेको पनि होइन । हामीलाई नयाँ कथामा नयाँ कलाकार चाहिने थियो । त्यसैले हामीले नयाँ कलाकारलाई लिएका हौं । फेरी ‘सायद २’ सिक्वेल पनि त होइन । यो ताजा कथामा बनेको फिल्म हो । ‘सायद २’ का तीन कलाकारहरु सुशिल, अमृत र कुशलसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :